Kenya dia mikendry ny fizahan-tany afrikanina hanalefaka ny fiantraikany COVID-19
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Kenya Breaking News » Kenya dia mikendry ny fizahan-tany afrikanina hanalefaka ny fiantraikany COVID-19
Birao fizahantany afrikanina • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Kenya Breaking News • Vaovao • fanorenana • tompon'andraikitra • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Ny birao fizahan-tany any Kenya dia manamafy ny ezaka amin'ny famarotana an'i Kenya amin'ny sisa amin'ny Afrika amin'ny alàlan'ny fikendrena ny tsena loharano lehibe ao amin'ny faritra afrikanina.
Kenya dia ivon-toeram-pizahantany ho an'ny tsena Atsinanana sy afovoany afovoany, miankina amin'ny serivisy amin'ny rivotra mahery sy ny fenitra ambony amin'ny fampiantranoana.
Ny birao fizahan-tany any Kenya dia nanao fivoriana tamin'ny faran'ny herinandro lasa teo niaraka tamin'ireo mpandraharaha mpizahatany avy any Oganda, Rwanda ary Etiopia ao amin'ny tanàna fizahan-tany amoron-tsiraka Mombasa.
Ny fizahantany any Afrika dia voasokajy ho tsena mitombo haingana indrindra eran'izao tontolo izao, miaraka amin'ireo manam-pahaizana momba ny fizahantany mahita ny isan'ny fizahantany ao amin'ny kaontinanta nitombo tamin'ny tahan'ny 8.6%.
Miorina amin'ny tsenan'ny fizahantany afrikanina manankarena sy mbola tsy voarara i Kenya, izao dia mandray andraikitra matotra mba hisarihana ireo mpizahatany avy amin'ny fanjakana afrikanina hafa, mikendry ny hanafainganana ny fizahantany taorian'ny fizotran-tany vokatry ny areti-mandringana COVID-19.
Kenya Birao fizahan-tany (KTB) tato anatin'ny volana vitsivitsy dia nanamafy ny ezaka natao hivarotana an'i Kenya amin'ny ambiny Afrika tamin'ny alàlan'ny fikendrena ny tsena loharanom-baovao lehibe ao amin'ny faritra afrikanina.
Manankarena amin'ny fiainana dia, lova ara-tantara sy ara-kolotsaina, Kenya dia eo amin'ireo firenena afrikana izay nijaly noho ny valan'aretina COVID-19 hita tamin'ny fihenan'ny fahatongavan'ireo mpizahatany avy tamin'ny loharanom-barotra lehibe tany Eropa sy Etazonia.
Kenya dia ivon-toeram-pizahan-tany ho an'ny tsena atsinanana sy afrika afovoany, miankina amin'ny serivisy fiaramanidina matanjaka sy fari-pitsaboana ambony ho an'ny mpizahatany noho ny firenena hafa any amin'ny faritra afrika atsinanana sy afovoany.
Manararaotra ny serivisy serivisy avo lenta, trano fandraisam-bahiny ary trano fandraisam-bahiny manana fizahan-tany sy toby fitsangatsanganana efa niorina tsara, Kenya izao dia mikendry ireo mpitsidika afrikanina hameno sy hameno ny banga ateraky ny fianjeran'ny fizahan-tany iraisam-pirenena.
Kenya Board Board (KTB) dia nanambara vao haingana fa ny fivarotana an'i Kenya ho toerana mahaliana ho an'ny mpitsidika ny faritra sisa amin'ny kaontinanta dia nohamafisina taorian'ny fanalefahana ny fameperana fitsangatsanganana COVID-19 nataon'ny fanjakana afrikanina maromaro.
Ny talen'ny KTB Corporate Urussier Wausi Walya dia nilaza fa misy ny tanjaky ny fizahan-tany sy ny fivezivezena any amin'ny faritra Afrika Atsinanana sy ny tsena afrikanina izay kasaina harahin'ny Birao amin'ny alàlan'ny sehatra maro isan-karazany ao anatin'izany ny fampahalalam-baovao.
Ny Birao dia nanao fivoriana tamin'ny faran'ny herinandro lasa teo niaraka tamin'ireo mpandraharaha mpizahatany avy any Oganda, Rwanda ary Etiopia ao amin'ny tanàna fizahan-tany amoron-tsiraka any Mombasa.
Kenya dia hikarakara fitsangatsanganana isan-karazany ho an'ireo mpandraharaha mpizahatany afrikanina hahafantarana azy ireo ny zava-manintona kanto ao amin'ny firenena, ao anatin'izany ny morontsiraka amoron-tsiraka, toeram-pialofana biby sy toerana arkeolojika, hoy i Walya.
"Heverin'i Kenya ho stratejika ny tsenan'ny fizahantany afrikanina, ka i Oganda no mitarika ny isan'ny mpitsidika an'ity firenena ity", hoy izy.
Ny hetsika ataon'ny KTB ankehitriny dia hampitombo ny fahatongavan'ireo mpizahatany amin'izao fotoana izao raha toa ka mivoaka ny fizahan-tany manerantany noho ny vokatry ny valanaretina COVID-19.
Ny Birao dia mikasa ihany koa hampiantrano fitsangatsanganana familiarization amin'ny toerana manintona maro any Kenya, mikendry ny hitaona ny varotra fitsangatsanganana mba hanandramana ny toerana haleha Kenyan miaraka amin'ny mety hisian'ny fizahan-tany goavana hisarika ny tsena isam-paritra sy ny afrikanina.
Nisy fety koktail manokana nokarakaraina ho an'ireo mpandraharaha fitsangantsanganana sy fizahan-tany 15 avy any Oganda, Rwanda ary Etiopia izay nandalo santionana vokatra maharitra herinandro momba ny toerana fizahan-tany malaza any Kenya.
Ny vondrona mpiasan'ny fizahantany isam-paritra dia nitsidika ireo toerana fizahan-tany manan-tantara ao Nairobi, Nanyuki, ny Maasai Mara, Tsavo, Diani, Malindi ary Watamu tamin'ny iraka hijery ireo toerana fizahan-tany isan-karazany azon'i Kenya atolotry ny mpanao safari afrikanina sy manerantany.
Ny fizahan-tany any Afrika dia voasokajy ho tsena mitombo haingana indrindra eran'izao tontolo izao, miaraka amin'ireo manam-pahaizana momba ny fizahantany mahita ny isan'ny fizahan-tany any amin'ny kaontinanta nitombo tamin'ny tahan'ny 8.6 isan-jato nandritra ny taona lasa raha oharina amin'ny salanisa fito isan-jato.
Ny birao fizahan-tany any Kenya dia nanamarika fa ny fampiroboroboana ny fizahan-tany any Afrika dia afaka mandrindra ny fotoana ahafahana miditra ao anatin'ny faritra ara-barotra afrikanina africain (AfCFTA) miaraka amin'ny filàna fanatsarana ny fitomboana sy ny fiaraha-miasa eo amin'ireo toerana fizahan-tany any Afrika hitrandrahana ny mety ho fisian'izany. any amin'ny kaontinanta.
Tanzania sy Kenya dia nanohana hetsika maimaimpoana ho an'ny dia rezionaly sy iraisam-pirenena taorian'ny filoham-pirenena avy amin'ny fanjakana roa mpifanila vodirindrina nifanaraka hanatsara ny fivezivezena sy ny fivezivezen'ny olona.
The Biraon'ny fizahantany afrikanina (ATB) dia miasa akaiky amin'ireo toerana afrikanina maro ankehitriny hanatsarana ny dia eto afrikanina amin'ny alàlan'ny sehatra fizahan-tany isam-paritra.